Thenga kwaye uthengise i-Maggot BSF kunye nendlela yokuthengisa iMaggot • Yurie BSF
Thenga kwaye uthengise iMaggot BSF kunye nendlela yokuthengisa ngayo
Ukuthengiswa kweMaggot neMaggot Marketing Method - iMaggot ye-BSF ithengisa ishishini okanye Thenga i-maggot ye-BSF enesibi okanye umlenze kubantu abathile base-Indonesian isinto engavamile. Ngethuba elizweni elikude, eli shishini liye laqhutywa iminyaka emashumi. Yintoni ekufuneka iguqulwe xa kuthengwa imbewu ye-BSF yemaggot liyimpumelelo yabalimi, kufuneka bahlole kwaye bahlole ngaphambi kokuthenga umlingo we-BSF.
Kulabo abangaziyo kwaye bazi iindlela zeMaggot ye-Maggot yanamuhla ngaphandle kokuvumba, eengqondweni zabo zibonakala zingcolile, zingcolile kwaye zicolile. singathethi ukufika kwamakhulu eempukane eziluhlaza eziphethe isifo sesifo.
Ngoko ke kufuneka ufunde ukulima okulungileyo kumagog, ngoko kuphela ukuba i-fly fly okanye i-BSF yakho kwifama yakho. Isiphumo sihlambulukile, asiyivumba kunye neendleko eziphantsi kakhulu.
Iindawo eziziwayo zineenzuzo ezininzi ezifana nokutya kweentlanzi, iinkuku, izilwanyana ezinobuthi, kwihlabathi leyeza, amapolisa njalonjalo.
Ibhizinisi leMaggot ukuba unomsebenzi onzulu wokuba usebenze unako ukufumana inzuzo eninzi, kwiimarike ze-niche njengokutya kwezilwanyana, iinombolo ziyinto emangalisayo, zikhangele nje kwiinkampani ezininzi zokutya zezilwanyana ezisungulwe e-Indonesia.
Iinkampani ezininzi zokutya ziwuphawu lokuba ishishini lokutya kwezilwanyana linenzuzo kakhulu. Ukuba unomdla wokuqalisa le shishini, kufuneka uqale wazi ukuhlalutya kweshishini.
Uhlalutyo lweeMaggot Business
Ukuhlalutya, ngokuqinisekileyo, kubandakanya intengo yembewu, ukuthengisa, iintlobo zokutya, i-media media. Into ebaluleke kakhulu kule shishini kukuba akufanele ihombe kwaye ukuze izuze inzuzo, abeendaba kufuneka babe kwizinto ezinobungozi bendalo, umgquba wemfuyo okanye inkunkuma.
Ukubala ngokubanzi kokuhlalutya kokulima kwemaggot ukusuka kwisiqalo sokuqala ukuya kukulinywa kwamaggot aphezulu kungafundiswa apha> Uhlalutyo lwe-Maggot Cultivation Business
Kutheni kufuneka ukulima umlingo ungenasiphelo? Kungenxa yokuba ukuba iphunga liza kumema iimpukane eziluhlaza, kwaye zibe yintambo ekuboniswa yintsapho kunye noluntu olukufutshane.
Inkqubo yokuhlakulela izigulane ezingenasiphelo yenza UKUPHELEKILE KUNYE UTHUTHI, Ukhuselekile ngenxa yokuba awuyi kubonakaliswa yintsapho kunye nentuthuzelo kuba ishishini lakho liyakwazi ukuqhubeka ngonaphakade.
Iinjongo zeMaggot Ukulima Ibhizinisi
Kukho inzuzo eninzi kwimveliso yamagot, enye yazo leyo kukuba ukulawula kulula kakhulu kwaye kuthatha enye ukuya kwiiyure ezimbini ngosuku.
Ngoko ekuqalekeni kweli shishini unokwenza okokuqala njengeshishini lokuqala okanye ukulima kwamancinci amancinci. Uphuhliso luyakwenziwa emva koko. Ukubala iindleko ezifuneka ukuba zilungiselelwe zingavula uhlalutyo lwamashishini.
Inkunzi efunekayo ukuvelisa i-maggot ibancinci, kuba izinto ezikulo mlimi zingasebenzisa izithako eziseleyo ekhaya. Imisebenzi yemihla ngemihla okanye iindleko zeendaba zenkcubeko nazo zitshitshwantshwankqhqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqlqlqlqlqlqlnlclclc
Kutheni kungabizi kwaye kukhululekile? kuba izithako zisebenzisa kakhulu inkunkuma, imfuyo nemfuyo ekhoyo kwiindawo zethu.
Izondlo eziqulethwe kumagog zigqityiwe kwaye umxholo weprotheni uphakeme kakhulu, ukwenzela ukuba ungasetyenziselwa ukondla kwezilwanyana kunye nokutya kwezilwanyana zemvelo kuzo zonke iintlobo zeentlanzi kunye neenkukhu.
Intengo yeMaggot yexabiso
Ixhomekeke kumgangatho onokuthengwa kwaye ngenjongo yintoni? Ukuba i-catfish okanye enye yokutya kwezilwanyana ezinentlanzi kuquka neenkukhu phakathi kweRp5.000 - Rp9.000 / kg.
Ngokuphathelele imbewu phakathi kweRp10.000 - Rp500.000 / kg, kuxhomekeke kumgangatho. umahluko ngumzekelo wokunyamekela. Indlela yokufumana imbewu esemgangathweni ingafika kwaye ibone indlela yokuphatha ngayo ngokuthe ngqo.
Okanye ngokubuza umdayisi malunga nendlela yokunyamekela imbewu. Ukuba umzekelo wokunakekelwa unikezwa udoti, umgangatho awufani. Umgangatho onje oku kulungile kwiintlanzi kunye nokutya kweenkukhu. Akufanele isetyenziswe njengembewu.
Khetha abafuyi abanamava kwaye abaninzi bafumana iingcomo ze-LIVE, kungekhona nje ukubhalwa kwimiyalezo okanye ubungqina obhaliweyo. Khetha ngokukhethekileyo imbewu ephezulu ekuqaleni kwempumelelo yokulima umlingo.
Ixabiso ngokuqhelekileyo lilingana ngokulinganayo nomgangatho, kubiza ngakumbi umgangatho. Kodwa jonga umfama kuqala!
Indlela ye-BSF Marketing Magic
Kubalulekile kulabo bafuna ukuqala le shishini, ukuba bafunde kuqala indlela yokuthengisa isivuno semva. Ngoko ukuba xa uqala ngokwenene kakhulu.
Ukulima umgogodla we-BSF ungathengiswa ngeendlela ezilandelayo: * Ukutyelela ngokuthe ngqo kwiifama zentlanzi, iiKhola, iindawo eziPhuphayo kunye nokuzilibazisa. Enye indlela ephumelelayo yokuba uhambe ngokuthe ngqo kwaye unikezele kumafama kwindawo esondeleyo. Thatha indlela efanelekileyo kunye nentsebenziswano.
Umzekelo: Mema intsebenziswano yamafama asele anamazwe kunye namava okugcina intlanzi, ngelixa i-maggot feed inikeza. Kucetyiswa ukuba esi sivumelwano sokubambisana senziwe isivumelwano esibhaliweyo.
Kuthekani kuthi ukuba akukho zifama zama-catfish okanye amafama enkukhu azungeze kuwe? Ukuba osondeleyo ayifumanekanga, ungayithengisa ngokusebenzisa izixhobo zendaba zoonxibelelwano ezifana ne-Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, i-YouTube okanye wenze iwebhusayithi yehhala.
I-BSG Marketing Marketing
Khuthaza i-Business Maggot yakho.
Iposi ngokuqhubekayo kwiimidiya ezahlukeneyo zentlalo, ungalibali ukuhlawula kunye namaqela anxulumene nentlanzi kunye neenkukhu. I-Facebook kufuneka usebenzise i-akhawunti yakho, yenza iphepha lekhawunti okanye iphepha.
Ukukhuthazwa kwiAkhawunti ze-Twitter
Singazisebenzisa kalula ii-media media Twitter ukuze sikhuthaze ishishini lethu. Kodwa bhetele, ngakumbi ukukhushulwa nge-Twitter, lungiselela iwebhusayithi yokuqala yamahhala. Ukuba kukho izithuba ezintsha ezabelwana ngazo kwiwebhusayithi esiyidalile.
Ukunyusa kwi-Instagram Accounts
Kwi-SOS yeli liyaziwa ngokuba lizinga elide lokuvala xa kuthelekiswa ne-akhawunti ye-Facebook, mhlawumbi ngenxa yokuba abantu base-Facebook bayisebenzisa kakhulu njengesixhobo sokusebenzisana nentlalo, ngelixa i-Instagram ibhekiselele kumashishini.
Le ndlela, nangona kuncinane "okunzima" kodwa yintengiso yethu, kodwa iziphumo zexesha elide zihle kakhulu, ngaphandle kwesi sixhobo sokwandisa ukuzithemba kwabathengi boshishino esibalekayo.
Ukuba unethamsanqa, kunye nale website yezobugcisa unokutsala abathengi abanokuvela phesheya kwelizwe, ngokuqinisekileyo bavame ukuhleleka ngokubanzi kunye nexabiso lingaba ngcono kuneemakethe zendawo.
Ukwenza iwebhusayithi ngoku kulula kakhulu kwaye ayithengi, nangona usebenzisa izakhiwo ezivela kwiGoogle, njengeblogspot kunye ne-Google ibhizinisi lam, bobabini i-100% mahala. Imizekelo yokukhutshulwa kwamahhala google blogspot
Kukho iinkonzo ezininzi ezinikezela ukwenza izitolo ze-intanethi ukusuka kwixabiso elincinci ukuya kwizinto ezifanelekileyo. Ukhetha nje ngokwebhajethi yakho. Le ndlela inokusetyenziswa kwe-google "iinkonzo zentengiso kwi-intanethi"
Khetha ngokucophelela, ezinye zazo zilungile, ezinye zimele zilumke. Nciphisa uze ubabuze uninzi, cela iziphakamiso malunga nawaphi amanyathelo okumele uzilungiselele. Ungakhethi iinkonzo ezingenako ukubonelela ngeengcebiso ezingcono kwivenkile ye-intanethi abaza kusebenza kuyo.
Ezinye iindawo zokuKhuthaza
Ungasebenzisa iziza ezinjenge-OLX, Tokopedia, nabanye. Vula iinkonzo zokuqeqesha ibhizinisi lokulima umlingo. Ukuze i-maggot yethu ikhule ngokukhawuleza, isicwangciso sethu simele sibe nobuchule kwaye siyingqayizivele, enye yazo ukuvula inkonzo yokuqeqeshwa kweshishini lokulima ngamaggot, kutheni le qhinga libalulekile ???
Ukwazisa uluntu jikelele ukuba ungomnye wamashishini okulima umlingo. Ngokuqeqeshwa kweli shishini kuza kwenza ukuba ishishini lakho lisasazeke ngokubanzi kweso sixeko kunye nangaphandle kwesixeko.
Ibhizinisi lakho liza kudumila ngokukhawuleza ngenxa yokuba luncedwa ngabo bawanikezwe uqeqesho lwezoshishino. Igama lokunyusa ibhizinisi lisebenza kakuhle xa kuthelekiswa nokunyuswa ngamajelo.
Luncedo kwabanye. Musa ukukhathazeka ukuba ngaba abo baqeqeshileyo baqhubeka befuna ukuqhuba ibhizinisi lokulima iMaggot. Mhlawumbi nabaqeqeshi baya kuba ngabahlobo bakho ngolunye usuku. Eli likhulu le shishini likhulu kakhulu linikezelwa ngezidingo ezikhulayo kunye nokunikezelwa okufutshane.
Uqeqesho loshishino lwaluqala kuphela kwiinjongo zentlalo, kodwa luza kuba yinkxaso okanye ishishini loqeqesho / umgqugquzeli kwintsimi yokulima umlingo.
Ukuvula ukuqeqeshwa kwebhizinisi lokulima iMaggot akudingi iindleko ezongezelelweyo, kuba ekulungiseleleni ulungele kwaye usebenza ngokuqhelekileyo. Uchaza kuphela indlela efanelekileyo kunye neyinyathelo, kufuneka kwenziwe ntoni ukususela ekuqaleni.
Thengisa iMbewu yeMaggot
Indlela yokukhetha iiMbewu zeMaggot eziMgangatho ophezulu kunye nooMpilo. Xa ukhetha imbewu yemaggot yokuzalisa okanye ukulima, kufuneka ukhethe imbewu ephezulu kunye nephilileyo.
Oku kungenxa yokuba imbewu ephezulu izakuvelisa ezininzi izimpungushe ze-BSF / izigulane. Ngenkcazo, imbewu ephakamileyo yindoda emnyama indiza imbewu ephethe iipropati eziphezulu, okokuba kukukwazi ukubonisa ubunjani bokuqala bomzali kwaye ube nomxholo ophezulu wezondlo ukuze babe nexabiso eliphezulu loqoqosho, kwaye abagula.
Oku kubonakala ekucebiseni abalimi indlela yokunyamekela kunye naluphi uhlobo lokutya olunikezelwa kwimbewu ngexesha lokunyamekela kwabo kwasebuntwaneni ukuba babe imbewu ye-BSF.
I-BSF Maggot ifana nesinye isilwanyana esifanele sithole ukutya okwaneleyo ngexesha lokulondoloza. Yongeza umququzeleli ekuqaleni kokulungiselela imidiya eyenza ukukhuthaza i-BSF ukuba iqabane kunye nokubeka amaqanda.
Iinzuzo zembewu ephezulu
Umveliso ophezulu kwaye ungabulawa lula
Ukukhawuleza ukukhupha kwiintshukumo ezinkulu ze-BSF / BSF
Ukufa okuphantsi kwama-larvae
Umgangatho wekhwalithi yeqanda ye-BSF iphakamileyo phakathi kwe-500 ukuya kwi-900 umsila ngomlenze omnye
Ngaba i-larva okanye i-maggot enkulu
Ukumelana nezilwanyana kunye nezifo, ngokukodwa kwisigaba sesana esingaphantsi kweveki
Iipropati eziphakamileyo zeembewu ze-BSF zingasentla zingagcinwa ngokuvelisa izityalo xa iimbewu ze-BSF zisasazwa.
Ngokuchanekileyo xa kuthengwa imbewu ye-BSF ephakamileyo iya kuvelisa i-larva / umgubho ngokuzenzekelayo kuwo wonke unyaka, into ephambili kukuvuna ngokukhawuleza kuphela i-18 ngosuku kunoko jikelele 30 nsuku zonke
Iimbewu eziphezulu zichasene neemeko ezingqongileyo, ngakumbi ngakumbi xa zisanda kutshatyalaliswa ukuya kwiiveki enye nangaphezulu, zisasazeka ngokukhawuleza ngenxa yezinga eliphezulu lokufa kwembewu, ukukhula ngokukhawuleza nokuphendula kwindlela yokulima.
Ukuba ubuncinci be-85% buzalisekile uhlobo oluphezulu lwoluhlu olukhankanywe ngasentla, isoldti esundu ibhabha imbewu ihlelwa njengophezulu. Ukuba ayihambelani neemfuneko ze-85% ngasentla, ngoko imbewu ye-BSF ichazwa njengesiqhelo.
Ukunika ukutya okulungisiweyo
Imbewu ephezulu: iifom enkulu ezinkulu 2cm
Ubunzima benyama: bunzima
AmaRoma: akukho phunga